Ụlọomeiwu: Gụọnụ ndị ọchịehi ndị oyiegwu - BBC News Ìgbò
BBC News, Ìgbò
Ụlọomeiwu: Gụọnụ ndị ọchịehi ndị oyiegwu
6 Eprel 2018
Ebe foto si, AFP
Ndị obodo dị na mpaghara ebe ndị ọchịehị nọ ebidola ị chekwa onwe ha
Ndị omeiwu ndị a ndị kpọrọ oku a ụnyaaahụ bụ Tọsday n'Abụja si ka gọọmenti kwụwa ndị agha na obodo niile dị na Benue steeti ebe ndị Fụlanị na-achị ehị na-awakpo, kama Ọsọ Nwamba nke bụ egwu onye gbacha ọ la.
Ndị omeiwu mmadụ anọ; John Dyeghndị, Dickson Takighir, Mr. Samuel Udende, Mark Terseer-Gbillah, ndị kwuchitere ndị ọzọ mara atụ na bido n'ụbọchị abụọ rue nke anọ ọnwa Eprel, na e gburu mmadụ iri abụọ ọhụrụ n'ebe ahụ, ebe ọtụtụ ka na-efu efu.
Ha boro ebubo na onweghị enyemaka ọ bụla si na aka ndị ọrụ nchekwa n'ebe ụfọdụ ọdachịi ndị a mere.
Ha were kpokuo gọọmenti etiti ka ọ gụọ ndị ọchịehi, "ndị oyiegwu".
Mmadụ 27 anwụọla na Kogi
Ndị Benue apụtaghị nabata Buhari
E gbuola mmadụ 11 na Plateau steeti
Ndị omeiwu a gosiri mgbakwojuanya na a kwụsịrị Ọsọ Nwamba nke ndị agha na steeti ahụ ebe ọ na-aga n'ihu na agbataobi ha dịka na Taraba.
Na nkọwa otu n'ime ha bụ Takighir, nkwafu ọbara nke mere nsonso a mere na Ikyon na Agasha na abala atọ na abali anọ nke ọnwa Eprel; ndị ọchịehi kpara mkpamkpa na Semaka, Asom na Babanruwa na abali atọ nke ọnwa Eprel ebe ha chetara ndị obodo Udei na Umenger n'a abalị abụọ nke abụọ Eprel.
"Otu a ka o siri mee na mpaghara Sengev, Mbakyondo na Mbapa dị n'okpuru ọchịchị Gwer-West dịka ndị ọchịehi ji ngwa agha na akpa ike ebe ahụ.
"Na Tsegaase,ha gburu mmadụ abụọ, ebe otu onye na-efu na Zwatema, e gburu mmadụ abụọ na Tse Adeke, otu onye na Tse Adudu, ebe otu onye na-efu na Tsekelefu. Ka ọ dị ugbua anyị amatabeghị mmadụ ole ihe metụtara n'Enger. N'abali atọ nke ọnwa Eprel, e gburu mmadụ anọ n'Anyebe, otu onye na Mbavihi nke wardụ Tonbo dị n'okpuru ọchịchị Logo local government."
Lee nri 10 ndị ogbenye ọgaranya na-erizi
Mahadum Covenant dara iwu - ọkaiwu
Gịnị butere mkpamkpa n'eme na Kogi?
Ndị omeimu ndị a kwuru na ọdachị ndịa niile mere na agbanyeghị na ndị agha na eme ọsọ Nwamba na steeti ahụ, ma ga n'ihu kwuo na ọ gbara ha gharịị na ndị agha kwụsịrị 'Ọsọ Nwamba' na-agbanyeghị gbuogbuogbuo nka na-eme ebe ahụ.
Ha kporo oku na gọọmenti ziga ndị agha na obodo ndị nsogbu a na-emetụta.
"Anyi na-akpọ gọọmenti etiti oku ka ha kọwara ndị Benue na ndịị alal Naijiria ihe mere na a kwụsịrị 'Ọsọ Nwamba' naa Benue ebe ihe na-ebe ka na-ebe.
"Anyị chọrọ ka gọọmenti ziga ndị agha na Benue dịka o kwesịrị ma nwe ebe ndị agha na-anọ na mpaghara ebe ihe ndị a na-eme were rue mgbe nsogbu ga-abịa na njedebe.
"Anyị na-akpọ gọọmenti etiti oku ka o mee ọ gụọ ndị ọchịehị 'ndị oyiegwu ozigbo n'ihi mpụ na imebi ihe ha na-eme. Ndị mba ụwa lee anya ma hụ ka ndị a si acho ikpochapụ ndị Benue."
Ọgụ ndị na-achịehi
Echiche ndị mmadụ n'eche maka Benue na-egosi ndi kwe ekwe
3 Febụwarị 2018
Egbuola ọtụtụ mmadụ ma gbaa ọtụtụ ụlọ ọku na Taraba
5 Maachị 2018
Vidio, Mama Boko Haram: Naịjirịa akwụghị ụgwọ ọbụla iji gbapụta ụmụ Dapchi
17 Ọgọọst 2018
Vidio, E kwesiri ime mkparịtaụka maka okwu 'sit at home' - Andy Uba
Gee ntị, BBC Nkeji
Ihe atọ ndị gọvanọ ugwu sị mere ha ejighị nabata inyefe Ndịda Naịjirịa ọchịchị na 2023
elekere 9 gara aga
Kọwaara m isi akụkọ
Vidio, Lee etu Amobi Ezeaku si bụrụ onye nkuzi ndị Rangers Enugu oge ọ dị naanị afọ 26, Duration 4,58
16 Septemba 2021
Lukaku na C Ronaldo a na-amazi aka?
11 Septemba 2021
Ọ fọrọ obere ka nkịta ọhịa tagbuo ManUnited
28 Ọgọọst 2021
Vidio, 'Ana m agbaburu egwuregwu ọsọ, mana ejirila m ya ritere Naịjiria ọlaedo' - Lauritta Onye, Duration 3,24
29 Jenụwarị 2021
Vidio, Ihe Naịjirịa mere m n'Olympics gbawara m obi - Cici Onyekwere, Duration 2,52
23 Ọgọọst 2021
Chelsea apịawaala Arsenal ogbe azụ na be ha
22 Ọgọọst 2021
Ịṅụ mmanya ọkụ o nwere ike ime ka mmadụ nwee 'cancer'?
20 Septemba 2021
Lee nje dị icheiche ị na-ekerịkọta oge ị na-esusu ọnụ
Onye bụ Abdulaziz Chivuzor Ude?
Ndị omekome na-amanye sit at home agbaala ụgbọala bu ngwa nri ọkụ n'Enugwu
Ihe Nnamdi Kanu gwara m na ọ chọrọ n'aka ndị na-eso ya- Ifeanyi Ejiofor
Emmanuel Ifeajuna: Etu o siri site na dike Naịjirịa bụrụ 'sabo' ndị Biafra
Etu otu ezinaụlọ sị gbuo nwa ha nwoke ma lie ya n'Ehime Mbano, n'Imo steeti
Nwaanyị o kwesịrị iji ncha asa ọtụ ya?
Amadioha na Kamalu, Njoku, ala, na arụsị ndị Igbo na-achụnyere aja
Onye bụdị nwada Salle a si n'ibugharịa ahịa na-ewu na soshal midia?
Nwoke kwesịrị idina nwaanyị ugboro 21 kwa ọnwa iji gbochie 'erectile dysfunction'
Ihe ise na-amasị Nnamdi Kanu ị maghị
Emelitere ikpeazụ na: 21 Nọvemba 2018
Ihe mere ị ga-eji nwee ntụkwasiobi na BBC News
© 2021 BBC. BBC anaghị ahụta maka ọdịnaya nke saịtị ndị dị na mpụga. Usoro anyị maka njikọ dị na mpụga.